Ukuhluma Ngokushesha nge-Ultrasonics - Hielscher Ultrasound Technology
Ukuhluma okusheshayo nge-Ultrasonics
Amahlumela ukudla okudumile kwezempilo okunothe amavithamini, amaprotheni, amaminerali kanye nama-antioxidants. Inqubo yokuhluma inzima futhi idla isikhathi. Ukusebenza kwe-Ultrasonic kwembewu kwandisa izinga lokuhluma, kusheshisa inqubo yokuhluma, kuthuthukisa iphrofayili yokudla, futhi kukhuthaze ukukhula kwezithombo ezinempilo. Ultrasonic steeping and priming of imbewu kuyindlela ekahle yokwandisa amandla akho wokuhluma.
Kuhluma Imbewu, Izinhlamvu Nezimbotyi
Amahlumela yimbewu ehlutshiwe ye-alfalfa, i-clover, i-sunflower, i-broccoli, isinaphi, isithombo, igalikhi, idill, ithanga, ama-alimondi, okusanhlamvu (isb. Amajikijolo kakolweni, i-quinoa, ibhali, i-rye, i-buckwheat, amabele, amabele), imidumba (isb. Amakinati , uphizi, amantongomane, udali) kanye nobhontshisi ohlukahlukene, njenge-mung, izinso, i-pinto, i-navy, ne-soy. Njengoba amahlumela ecebile ngama-phytonutrients afana namaprotheni, amavithamini, amaminerali kanye nama-antioxidants kanye nama-calories aphansi, amafutha ne-sodium, athathwa kabanzi njenge “ukudla okunempilo” kanye ne- “superfood”. Kubandakanya amahlumela ohlelweni lokudla kwansuku zonke, kusiza ukondla umzimba nge-fiber, amavithamini, amaminerali, namanye ama-phytonutrients akhuthaza impilo.
Ukutholakala kokutholakala komsoco kumahlumela nakumagciwane amancane: Izinhlamvu nezitshalo ezinemidumba kuqukethe ama-anti-nutrient ahlukahlukene, athikameza ukugaya futhi avimbele ukutholakala kwama-micronutrients namaminerali. Isibonelo, i-trypsin inhibitors kanye nama-phytates, akhona okusanhlamvu naku-legumes, anciphisa ukugaya kwamaprotheni nokutholwa kwamaminerali, ngokulandelana. I-Trypsin inhibitors ivimbela ukusebenza kwe-enzyme enzyme trypsin, ukuze amaprotheni angenisiwe angakwazi ukugaywa kahle futhi angene emzimbeni.
Ngakho-ke, ukuhluma nokuhluma kusetshenziselwa ukuvimbela lawa ma-anti-nutrient. Ngesikhathi sokuhluma, izindlela zokukhiqiza izakhi zomzimba namakhemikhali e-phytochemicals ziyaqalwa futhi ama-enzyme ayasebenza. Ngaleyo ndlela, imbewu ehlumayo nemidumba kunikeza izakhamzimba eziningi ezingafinyeleleka.
Ngesikhathi sokuhluma nenqubo yokuhluma, ama-enzyme endogen afana ne-α ‐ amylase, i-pullulanase, i-phytase, namanye ama-glucosidase aqala ukusebenza embewini. La ma-enzyme alulaza izinto ezilwa nokudla futhi ahlukanise ama-macronutrients ayinkimbinkimbi abe amafomu alula futhi agayeka kalula.
Amahlumela agcwele izakhamzimba ezikhuthaza impilo njengamaprotheni, i-chlorophyll, amavithamini, amaminerali, ama-enzyme, ama-amino acid kanye ne-phyto-chemical. Isibonelo, amahlumela we-broccoli aziwa kakhulu ukuthi acebe kakhulu nge-sulfurophane. Uma kuqhathaniswa nama-florets avuthiwe e-broccoli, imbewu ehlumayo ye-broccoli iqukethe i-sulfurophane ephindwe ka-50.
Ukutshalwa kwamahlumela kuyasebenza futhi kudla isikhathi. Ngesikhathi senqubo yokuhluma, inhlanzeko nezimo zenhlanzeko kubalulekile ukuvimbela ukungcoliswa kwamagciwane kanye nokonakala. Ukucwilisa, ukuhluma nokuhluma kusizwa nge-Ultrasonically kusheshisa ukulima nokukhula kwamahlumela acebile anezakhamzimba, anamandla nezithombo.
Ukulima Okuthuthukisiwe Kwamahlumela kanye neMicrogreens nge-Ultrasonics
Ukweqa kwe-Ultrasonic, ukuhluma nokuhluma kuqinisa inqubo yakho yokulima yamahlumela kanye nemifino emincane. Ukuhluma kuyinqubo ekhathazayo futhi edla isikhathi, ethambekele ekonakaleni ngenxa yesikhunta namagciwane. Njengoba imbewu ichitha isikhathi esiningi emanzini (ngesikhathi sokujuluka nokugeleza) nasendaweni enomswakama kakhulu (ngesikhathi sesigaba sokuhluma), ingozi yokungcola kanye nokonakala kwe-microbial iphezulu kakhulu. Lapho amahlumela awonakele nemifino emincane kudliwe, kubangela ukudla okunobuthi obukhulu. Ukuhluma kwe-Ultrasonic nokuhluma kunciphisa isikhathi sokungena nokuhluma. Njengoba imbewu ihluma futhi ikhula ngokushesha, isikhathi sokuba khona ezindaweni eziphezulu zomswakama siyancipha. Ngaleyo ndlela, isikhathi sokukhula kwamagciwane kanye nokonakala sincishisiwe. Ukuhluma kwe-Ultrasonic akugcini nje ngokwenza ukuthi inqubo yakho yokuhluma isebenze kahle, futhi kunciphisa ubungozi bokungcola.
Ngaphezu kwalokho, ucwaningo oluhlukahlukene lukhombisile ukuthi amahlumela acwiliswe nge-ultrasonically ahamba phambili ngephrofayili ephakeme yokudla okunempilo njengamaprotheni aphezulu, uvithamini kanye nokuqukethwe kwe-phytonutrient uma kuqhathaniswa nembewu ehluma ngokujwayelekile. Amahlumela akhula nge-Ultrasonically akhombisa amandla amakhulu esithombo, futhi.
I-Ultrasonicator UP400St ukuthola imbewu kuqala. Ukwelashwa kwe-Ultrasonic kuholela ekuhlumeni okusheshayo, iphrofayili ephezulu yezakhi zomzimba namandla amakhulu esithombo.
I-Ultrasonic hydro-priming ithuthukisa ukuthathwa kwamanzi nezakhi. Ukuqhathaniswa kwamalenti anezwi (40Ws / g) vs ama-lentile angenayo i-sonicated kubonisa ukuthi i-sonication ithuthukisa ukutholwa kwamanzi kakhulu.
Ukwenza kwe-Ultrasonic Seed
Ukuhluma okuqinisayo kwe-Ultrasonically kubangelwa imiphumela yemishini ye-ultrasonic / acoustic cavitation. Imiphumela ye-ultrasonic cavitation inomthelela kugobolondo lembewu: Ihlukanisa ingubo yembewu bese idala ngaleyo ndlela ubukhulu obukhulu bembewu. Kusho ukuthi ukuhlukaniswa kwe-ultrasonic kwengubo yembewu kugobhoza igobolondo. Ngaphezu kwalokho, i-sonication ikhulisa usayizi wepore ukuze ukudluliswa okukhulu kwesisindo phakathi kwembewu kanye nendawo yokukhula kwenzeke. Ukudluliswa kwamandla okuqinisiwe kunika imbewu ngamanzi nezakhamzimba ezidingekayo. Ngenxa yokwanda kweporosity nokungena, imbewu ingathatha amanzi nezakhamzimba ngokushesha. I-hydration engcono nokwanda kokugcinwa kwamanzi ezimbewini / ezinhlameni ezomile kubangela ukukhula okusheshayo kwamahlumela.
Isikhathi sokwelashwa kwembewu ye-ultrasonic kuthatha imizuzu embalwa kuphela. Isikhathi esithile se-sonication sincike ebukhuni bengubo yembewu futhi singaxwaya phakathi kwemizuzu emi-4 kuye kwayi-6 yezinhlobo eziningi zembewu. Ukuvumelanisa ukwelashwa kwe-ultrasonic kuya ohlotsheni oluthile lwembewu / okusanhlamvu, i-amplitude ye-ultrasonicator yinto ebalulekile ebamba iqhaza elikhulu ekusebenzeni kwe-ultrasonic soaking kanye ne-priming yembewu. Lapho igobolondo lembewu liba lukhuni futhi lijiyile, kudingeka ama-amplitudes aphakeme. I-Hielscher Ultrasonics inolwazi olunzulu ngokuswakama / ukujija okusizwa nge-ultrasonically, priming kanye nokuhluma kwembewu. Sizokunikeza imishini ye-ultrasonic efanelekile kunazo zonke futhi ephumelelayo yezinhlobo zakho zamahlumela namandla wokuhluma.
Ukubelethwa kwesikhathi eside kubangela ukuhluma okungcono kwamahlamvu kaCalanthe. (Shin no-al. 2011)
Inani Eliphakeme Lokunomsoco Wamahlumela Ahluma Nge-Ultrasonically
Ukuhluma okusizwe nge-Ultrasonically akugcini ngokukhuthaza isivinini sokuhluma kanye nesilinganiso sokuphakama, kepha futhi kunemiphumela emihle kwikhwalithi yokudla okunempilo kwamahlumela. Izifundo eziningana zikhombise i-biosynthesis ethuthukisiwe yama-phytonutrients yi-ultrasonication. UYang et al. (2015) kukalwe okuqukethwe okwandisiwe kwe-isoflavonoid kumahlumela abhontshisi wesoya. Inani elikhulisiwe le-isoflavoonoids daidzein kanye ne-genistein ngo-39.13 kanye no-96.91%, ngokulandelana, uma kuqhathaniswa namasampula angewona awendodana. Ubhontshisi wesoya owenziwe nge-ultrasonically uphinde wakhombisa i-gamma-aminobutyric acid (GABA) ephakeme ngama-43.4%. Kwesinye isifundo, u-Yu et al. (I-2016) ibone umthamo we-antioxidant owenziwe ngcono ngethisi le-Romaine ephathwe nge-ultrasonically.
U-Ampofo (2020) ukhombise emcabangweni wakhe ukuthi ukwenziwa kukabhontshisi ojwayelekile ku-360 W ngemizuzu engama-60 kubangele ukuqongelela okwandayo kwezimpawu zokucindezeleka ku-96 h wokuhluma. Ingcindezi ngesikhathi sokukhula kwezithombo iholela emisebenzini ephakeme yokuvikela i-phenylpropanoid edala ama-enzyme, ama-phenolic compounds namandla e-antioxidant emazingeni abalulekile ngokuqhathanisa nesampula yokulawula engeyona eye-sonicated. I-ultrasonication inciphise isikhathi sokuhluma ngama-60 h, uma kuqhathaniswa nolawulo. Imbewu ephathwe nge-Ultrasonically ikhombise ukuqhamuka kwama-radicles nge-24 h yokuhluma ngobude obukhulu bezikhathi ezikhulayo, kanti uma kuqhathaniswa amasampula wokulawula abambezele ukuvela kwe-radicle kuze kufike kuma-48 h wokuhluma. Mayelana nokudla okunomsoco, amahlumela kabhontshisi abonisiwe abonise okuqukethwe okuphezulu kwama-flavonoids okuphelele okungu-6.6 kanye nokuqukethwe okungu-11.57 okuphezulu okuphelele kokuqukethwe kwe-anthocyanin uma kuqhathaniswa namasampula angewona awendodana.
Hielscher Ultrasonics’ ama-probe ultrasonicators alawulwa kahle. Amapharamitha enqubo njengokulawulwa kwe-amplitude kanye nokushisa kanye nokufana kanye nokuvezwa kwayo yonke imbewu endaweni ye-ultrasonic cavitation yizinto ezibalulekile ukuze kuvuse i-biosynthesis elawulwa phezulu ezinhlamvwini nasezihlumeni.
Izinzuzo Zokuhluma Okukhuthazwa Ngokwe-Ultrasonically
Kwehliswe ukucwilisa ngaphambi kwesikhathi
Ukukhula okungaphezulu komfaniswano
Ukutholwa komsoco okuthuthukisiwe
Ukwandiswa kwamandla esithombo
Inani eliphakeme lokudla okunempilo kwamahlumela
Ukwehlisa ingozi yokonakala kwesibuko
Inqubo ebangeni lokudla
elula futhi iphephile ukusebenza
SonoStation – isisombululo se-turnkey esilula sezinqubo ze-ultrasonic
Izifundo Zamacala Okuhluma Kwe-Ultrasonic
UHassan et al. (2020) khombisa ukuthi imbewu yamabele e-ultrasonically ikhombisa iphrofayili yokuthuthuka kakhulu yokudla okunempilo. Iphrofayili nenani lama-phytonutrients embewini yamabele athuthukiswe yi-ultrasonication. Izakhi ezahlukahlukene ze-phytochemical (alkaloids, phytates, saponins, kanye ne-sterols), umsebenzi wokuqothula (i-2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl assay, i-ferric ukunciphisa amandla we-antioxidant amandla, kanye ne-oxygen radical absorbance capacity assay assay), iphrofayli ye-phenolic (ingqikithi yama-phenolics okuqukethwe , okuqukethwe okuphelele kwe-flavonoids, i-ferulic acid, i-gallic acid, i-catechin, i-quercetin, ne-tannin) kanye ne-in vitro protein digestibility (IVPD%) kuhlolwe umthelela wokuhluma kwe-ultrasonic kwamahlumela amabele. Zonke izinto ezivivinyiwe zenziwe ngcono ngokwelashwa kwe-ultrasonic. Amahlumela aphathwayo akhombisa umsebenzi ophakeme kakhulu wokuhlwitha kanye nephrofayili ecebile ye-phenolic enamaphesenti aphezulu we-IVPD.
Ukwelashwa okuncane kwe-sonication ku-40% amplitude yamaminithi ama-5 kukhombise ukuthuthuka okukhulu. Ngemuva kokuhluma, amahlumela aphethwe ngamabele aphethwe yi-ultrasound akhombise iphrofayili ephezulu yamaphytochemicals angasebenza njengezinto ezibalulekile eziluhlaza ekukhiqizeni ukudla okuphezulu kwamaprotheni ngezindleko eziphansi.
UPetru et al. (2018) uphenye isenzo se-ultrasonic cavitation ngesikhathi sokuwa kwama-bubble cavitation. Bathola ukuthi i-cavitation ye-ultrasonic inciphisa ukuguguleka okuncane kumajazi wembewu, okwandisa ukutholakala kwegobolondo lembewu futhi kukhuthaze ukudluliswa kwabantu. Bafunde umthelela wokwelashwa kwe-ultrasonic kokuhluma kwembewu, ukuvela kanye nezigaba zokuqala zokukhula kwezithombo ze-triticale (rye ne-hybride kakolweni). Amasampula wembewu ye-50 aphathwa yi-ultrasound emanzini kulo mbuso olandelayo: ubukhulu 15 µm ekushiseni kwama-25 degС ngezikhathi ezahlukahlukene zokwelashwa 0, 2, 4, 6, 8 min. Ngemuva kwalokho imbewu yabekelwa ukuhluma futhi yahluma ephepheni elimanzi lemifanekiso ekamelweni lokushisa. Umphumela obonakala kakhulu wokwelashwa kwe-US ubonwe isikhathi sokwelashwa kwemizuzu emi-4. Idatha efanelekile yokuhluma kwe-ultrasonically elashwe ngaphakathi kwembewu ye-4 min triticale kanye nokuvela kwezithombo ngokuqhathaniswa nembewu engalashwa ngo-15 – Ama-20% adlula ubude bezimbewu zokulawula. Imbewu ephathwa nge-ultrasonically ihluma phambilini futhi ikhombisa amandla amakhulu wokuhluma, ubude obuphakeme bezithombo nezimpande.
Amaprosesa we-Ultrasonic Wokuhluma Okushubile Nokuhluma
Amaprosesa asebenza kahle kakhulu e-Hielscher Ultrasonics asetshenziswa ekudleni nasekulimeni ukukhuthaza ukuhluma nokuhluma, ukuhlunga imbewu kufaka phakathi i-osmo-priming, hydro-priming kanye nezinqubo zokuvutshelwa. Ubuchwepheshe besimanje, ubungani obusebenziseka kalula, ukuphepha nokusebenza nokuqina kuyizinto ezisemqoka kubo bonke abaprosesa be-Hielscher Ultrasonics.
Ama-ultrasonicators ama-Hielscher angasetshenziselwa ukuqhutshwa nokuqhutshwa kokugeleza okuqhubekayo. Ngokuya ngevolumu yenqubo yakho kanye nokufakwa kwehora, kunganconywa ukucubungula okusemgqeni. Ngenkathi ukuqoqwa kwamavolumu amakhulu kuthola isikhathi esithe xaxa futhi kusebenza kakhulu, inqubo eqhubekayo ye-inication sonication isebenza kahle, iyashesha futhi idinga umsebenzi omncane kakhulu.
Amaprosesa we-Ultrasonic Wawo Wonke Amandla Wokukhiqiza
Uhla lomkhiqizo we-Hielscher Ultrasonics lumboza ububanzi obugcwele bama-processor we-ultrasonic kusuka kuma-compact lab ultrasonicators ngaphezulu kwebench-top kanye nezinhlelo zokushayela kumaprosesa asezimboni asebenza ngokugcwele anamandla wokucubungula ukulayisha amaloli ngehora. Uhla oluphelele lomkhiqizo lusivumela ukuthi sikunikeze iprosesa ye-ultrasonic efaneleke kakhulu kumthamo wenqubo nezinhloso zakho.
Izinhlelo ze-Ultrasonic benchtop zilungele ukuhlolwa okungenzeka nokusebenza kwenqubo. Ukulinganiswa komugqa ngokuya ngemingcele yenqubo esungulwe kwenza kube lula kakhulu ukukhulisa amandla wokucubungula kusuka ezinkatho ezincane kuya ekukhiqizeni ngokugcwele ukuthengisa. Ukukhuphula amandla kungenziwa ngokufaka iyunithi enamandla kakhulu ye-mixer ye-ultrasonic noma ukuhlanganisa ama-ultrasonicators amaningi ngokufana. Nge-UIP16000, i-Hielscher inikeza iprosesa le-ultrasonic elinamandla kunawo wonke emhlabeni.
Ama-Amplitudes Alawulekayo Kahle Emiphumela Engcono
Onke ama-ultrasonicators aseHielscher alawulwa kahle futhi ngaleyo ndlela amathuluzi okusebenza athembekile. I-amplitude ingenye yezinqubo ezibalulekile zenqubo ezithonya ukusebenza kahle nokusebenza kokuhluma kwe-ultrasonic nokuhluma. Imbewu enokumbozwa okuthambile idinga ukwelashwa okuncane kwe-sonication nezilungiselelo eziphansi ze-amplitude, ngenkathi imbewu enegobolondo eliqinile futhi eliqinile ibonisa imiphumela emihle yokuhluma lapho inikezwa kuma-amplitudes aphezulu. Zonke Hielscher Ultrasonics’ amaprosesa avumela ukumiswa okuqondile kwe-amplitude. I-Sonotrodes nezimpondo ze-booster yizinsiza ezivumela ukuguqula ubukhulu endaweni ebanzi kakhulu. Amaprosesa aseHielscher ezimboni ze-ultrasonic angaletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu futhi ahambise amandla adingekayo e-ultrasonic wezicelo ezifunwayo. Amplitudes afika ku-200µm angaqhutshwa ngokuqhubekayo ngokuqhubekayo ekusebenzeni okungama-24/7.
Amasethingi we-amplitude aqondile nokuqapha unomphela kwamapharamitha enqubo ye-ultrasonic nge-smart software kukunikeza ithuba lokuphatha imbewu yakho ngezimo ezisebenza kahle kakhulu ze-ultrasonic. I-sonication efanelekile yemiphumela emihle yokuhluma!
Ukuqina kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunayo. Lokhu kwenza imishini ye-ultrasonic ye-Hielscher ithuluzi lomsebenzi elithembekile eligcwalisa izidingo zakho zokucubungula.
Ukuhlola okulula, okungenazingozi
Izinqubo ze-Ultrasonic zingalinganiswa ngokuphelele. Lokhu kusho ukuthi yonke imiphumela oyizuzile usebenzisa ilebhu noma ibhentshi-phezulu i-ultrasonicator, ingakalwa ngokukhishwa okufanayo kusetshenziswa amapharamitha wenqubo efanayo. Lokhu kwenza i-ultrasonication ilungele ukuhlolwa okungenakho ubungozi, ukwenziwa kwenqubo nokusebenza okulandelayo kokukhiqizwa kwezebhizinisi. Xhumana nathi ukuze ufunde ukuthi i-sonication ingakhuphula kanjani isivuno sakho sehlumela nekhwalithi.
Ikhwalithi ephezulu kakhulu – Yakhelwe Yakheka EJalimane
Njengebhizinisi eliphethwe ngumndeni neliphethwe ngumndeni, i-Hielscher ibeka phambili amazinga aphezulu ekhwalithi yamaprosesa ayo e-ultrasonic. Onke ama-ultrasonicators aklanyelwe, akhiqizwa futhi ahlolwa kahle ekomkhulu lethu lasekhaya eTeltow ngaseBerlin, eJalimane. Ukuqina nokuthembeka kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuyenza ihhashi lomsebenzi ekukhiqizeni kwakho. Ukusebenza okungu-24/7 ngaphansi kokulayishwa okuphelele futhi ezindaweni ezifuna kakhulu kuyisici semvelo sama-ultrasonicators asebenza kahle kakhulu kaHielscher.
Ungathenga iprosesa le-Hielscher le-ultrasonic nganoma yisiphi isayizi ehlukile futhi ilungiselelwe kahle kuzidingo zenqubo yakho. Ukusuka ekwelapheni imbewu ku-beaker encane yelabhu kuya ekuxubeni okuqhubekayo-ngokuxubana kwezimbewu zensimbi ezingeni lezimboni, i-Hielscher Ultrasonics inikeza i-ultrasonicator efanelekayo kuwe! Sicela uxhumane nathi – siyajabula ukukuncoma ukusetha okuhle kwe-ultrasonic!
Smith G. Nkhata, Emmanuel Ayua, Elijah H. Kamau, Jean‐Bosco Shingiro (2018): Fermentation and Germination improve Nutritional Value of cereals and legumes through Activation of Endogenous Enzymes. Food Sci Nutr. 2018 Nov; 6(8): 2446–2458.
Sadia Hassan, Muhammad Imran, Muhammad Haseeb Ahmad, Muhammad Imran Khan, Changmou Xu , Muhammad Kamran Khan, Niaz Muhammad (2020): Phytochemical characterization of ultrasound-processed sorghum sprouts for the use in functional foods. International Journal of Food Properties, 23:1, 2020. 853-863.
Vagner Alex Mendes Losado; Keli Cristiana Cantelli, Juliana Steffens; Clarice Steffens, Mercedes Concordia Carrao-Panizzi (2017): Improvement in Soybean Sprouts with Ultrasound Power. B.CEPPA, Curitiba, v. 35, n. 2, Jul./Dec. 2017.
Josephine Oforiwaa Ampofo (2020): Elicitation of Phenolic Biosynthesis and Antioxidative Capacities in Common Bean (Phaseolus vulgaris) Sprouts. Doctoral Thesis McGill University Canada 2020.
Dumitraş Petru, Bologa Mircea, Maslobrod Serghei, Shemyakova Tatiana, Balan Gheorghe (2018): Effect of Ultrasonic Treatment on the Seed Germination and Emergence of Seedlings of Triticale. Conference Paper “International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics” in Chișinău, Moldova, 25-28 Septembrie 2018.
I-Ultrasonic Ukubonga Nokuhluma
Ukuqothulwa kwembewu ye-Ultrasonic: Indlela iNyanaication Ethuthukisa Ngayo Ukuhluma
I-Ultrasonic Malting kanye neMalt Germination
Ultrasonic Obumba amakhambi Amakhambi
Ultrasonic Anthocyanin Extraction
Kungani amahlumela aqukethe izakhamzimba eziningi?
Ukuhluma nokuhluma kuyizinyathelo ekukhuleni kwesitshalo, lapho izindlela eziningi zamakhemikhali zisebenza ukuqala ukuqala kokukhula nokukhuthaza ukukhula kwesitshalo esinempilo, esingasinda. Lezi zindlela zamakhemikhali zifaka phakathi ukusebenza kwama-enzyme amaningi. Nge-biosynthesis, ama-metabolite wesibili (aka phyto-chemical) akhiwa ukuguqulwa kwe-enzymatic. Lawa ma-metabolite wesibili aziwa njengokukhuthaza ezempilo. Izibonelo ezivelele zifaka ama-polyphenols, terpenes, sulfuraphane, nezinye eziningi.
Isibonelo esisodwa se-biosynthesis enjalo yi-enzyme phenylalanine ammonia-lyase (PAL). I-enzyme ye-PAL ivuselela izindlela ze-biosynthesis yamakhemikhali e-phyto-ahlukile. Lapho le enzyme ivinjelwe, iba yisici esinqunyelwe se-biosynthesis yama-phenolic acid nama-flavonoids. Incazelo engaba khona yokuqukethwe okuphezulu kwamakhemikhali kumahlumela ukuthi umsebenzi we-PAL uyalawulwa ngesikhathi sokuhluma. Ukuchazwa okuhlukile kuphakamisa ukuthi ama-phenolic compounds aboshiwe afakwa nge-hydrolysed aand / noma ukuthi de de novo biosynthesis yama-phenols ku-axis yombungu wamahlumela ayenzeka. Amakhemikhali amaningi e-phytochemicals ayaziwa ngezici zawo zokulwa namachibi, ezichaza ukwanda komsebenzi we-antioxidant wezinhlamvu ezihluma kanye nemidumba.
Ama-phytonutrients aphezulu, amahlumela ayengeza kakhulu ohlelweni lokudla. Ama-phytonutrients afaka isandla ezindleleni eziningi emzimbeni womuntu futhi angavimbela futhi / noma enze ngcono izifo.
Ucwaningo luthole izinzuzo ezahlukahlukene zokudla okunempilo zokuhluma nokuhlumisa imbewu, okusanhlamvu nemidumba:
Okwe-buckwheat, ngemuva kwama-72hr wokuhluma kutholakale okuqukethwe kwamaprotheni okwande kakhulu. Ngaphezu kwalokho, i-buckwheat ehluma yayinyuse inani lama-phenolics aphelele, i-flavonoid, ne-tannin efingqiwe (UZhang et al., 2015).
Ku-millet omile omile, ukugayeka kwamaprotheni kwanda ngama-64%. (Mbithi-Mwikya et al. 2000)
Okwezinhlamvu zommbila omhlophe, lapho kuhluma izinsuku ezi-5 izakhi ze-phenolic ezingatholakali zanda ngama-92%.